Xaalad CUSUB oo ku soo korortay Isgoys-yada Muqdisho | YoobsanNews.com
Muqdisho: [Yoobsannews Online] Ma ahan wax ku cusub indhaha dadka Muqdisho in ay waddooyinka kula kulmaan ciidamo boolis & milateri ah oo jidadka ku baara dadka & gaadiidka, hasse ahaatee waxaa muddooyinkii u dambeeyey lagu arkayey inta badan is-goysada magaalada ciidamo boolis ah kuwaas oo ay ka muuqato hab dhaqan ka beddelan ciidamadii hore.
Ciidamadan oo xiran dareyska booliska sida la sheegay waxaa ka mamnuuc ah isticmaalka maandooriyaha jaadka, marka ay gaadiidka iyo dadweynaha baarayaan waxeey ula dhaqmaan si wanaagsan, iyaga oo howlgaladoodu ay yihiin kuwa 24 saacadood ah.
“Waxaa ka muuqata haybad ciidan oo dhammeystiran, arki meysid iyaga oo [shaxaad] weydiisanaya dadweynaha. Cid kasta oo tillaabadani ka dambeysa waxeey mudan tahay bogaadin, xaafadda aan deganahay waxaa ku yaraaday tuugadii, maalin & habeen boolisku waxeey ku gaaf-wareegaan xaafadaha, waxeeyna shicibka ula dhaqmaan si wanaagsan, haddii dedaaladan ay sii socdaan waxaa hubaa in lagu diirsan doono” Ayuu yiri Maxamed Cali oo ka tirsan odayaasha degmada Wardhgiileey oo ka mid ah deegaanada ay ciidamadaasi ka howlgalaan.
Previous: VIDEO NEWS: Guddoomiyaha Tasho Community “Haddaad gabar wax bartid waxeey la mid tahay adigoo mushtamac wax bartay”
Next: Maxeey ka cabanayaan Soomaalida caafimaadka u doonta dalka Hindiya.?